Myanmar Man United. - Page2of 143 - Red Devil
Myanmar Man United.
KT | 27/06/2022
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း နံနက်ခင်းသတင်းတိုများ ဖရန်ကီ ဒီယွန်း သည် Erik Ten Hag ကိုယ်တိုင် Man United အသင်း နည်းပြဘဝ အစမှာ ပထမဆုံး ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ ​ပေါင် (69) သန်း တန် ကွင်းလယ်လူ ဖြစ်လာမည် ။ ဖရန်ကီ ဒီယွန်း သည် Degea /
ဘရူနိုအတွက်စံပြဖြစ်လာနိုင်မယ့် ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် အဲရစ်ဆင်
KT | 26/06/2022
ဘရူနိုအတွက်စံပြဖြစ်လာနိုင်မယ့် ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် အဲရစ်ဆင် မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း ဝက်စ်ဘရောင်းက အလားအလာရှိတဲ့ ကစားသမားသစ် အဲရစ်ဆင်က 2021/22 ရာသီမှာ ဆိုးရွားတဲ့ရာသီကို ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို အကောင်းဆုံး ဆွဲခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ အသက် 30 အရွယ် အဲရစ်ဆင်သည် ဘရန့်ဖို့ဒ်နှင့် ၎င်း၏ ကာလတို သဘောတူညီချက် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ယူနိုက်တက်နှင့် စာချုပ်ရန်
တန်ဟဂ်ကစားကွက်ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်သူ ဒီဂျောင်ကို ပေါင်( ၆၉) သန်း+ အပိုဆုကြေးနဲ့ခေါ်ယူရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
တန်ဟဂ်ကစားကွက်ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်သူ ဒီဂျောင်ကို ပေါင်( ၆၉) သန်း+ အပိုဆုကြေးနဲ့ခေါ်ယူရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ပရီးမီးယားလိဂ် နာမည်ကြီးအသင်း တသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်က သူတို့အသင်းရဲ့ ယခု နွေရာသီ နံပါတ်တစ် ပစ်မှတ် ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ ကြယ်ပွင့် ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်အတွက် ဘာစီလိုနာနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး သဘောတူညီမှု ရရှိရန်
ယူနိုက်တက်အသင်းဆီရောက်ရှိဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီဒီဂျောင်ရဲ့ ကစားပုံအကြောင်း
ယူနိုက်တက်အသင်းဆီရောက်ရှိဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီဒီဂျောင်ရဲ့ ကစားပုံအကြောင်း မန်ယူအသင်းသည် ဘာစီလိုနာအသင်း၏ ဒတ်ခ်ျကြယ်ပွင့်ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီဒီယွန်း (၂၅ နှစ်)အားခေါ်ယူရန် ပြောင်းရွှေ့ကြေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဥရောပမီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ယူနိုက်တက်သည် ဖရန်ကီဒီယောင်အတွက် ယူရိုသန်း ၈၀ ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ကြေးတိုးမြင့်ကမ်းလှမ်းရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ ထိုပမာဏသည် ဘာစီလိုနာ တောင်းဆိုထားသည့် ယူရို ၈၅ သန်းနှင့် နီးစပ်သော ပမာဏဖြစ်သည်။ လာမည့်
တန်ဟဂ်ရဲ့တိုက်စစ်မှာရော်နယ်ဒိုဘယ်လောက်အထိအရေးပါလာမလဲဆိုတာပြောပြလာတဲ့ သရဲနီဟောင်း ဂျွန်အိုရှေး
တန်ဟဂ်ရဲ့တိုက်စစ်မှာရော်နယ်ဒိုဘယ်လောက်အထိအရေးပါလာမလဲဆိုတာပြောပြလာတဲ့ သရဲနီဟောင်း ဂျွန်အိုရှေး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ဂျွန်အိုရှေးက အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ နည်းပြသစ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အဲရစ်တန်းဟဂ် အနေနဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုကို နည်းမှန်လမ်းမှန် အသုံးပြုဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါ အေဂျက်စ် နည်းပြဟောင်းဟာ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂန္တဝင်တိုက်စစ်မှူး တယောက်ဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုလို ကစားသမားတဦးကို ဘယ်တုန်းကမှ ကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိတာကြောင့် ယူနိုက်တက်နဲ့ပတ်သက်နေသူတွေက စိုးရိမ်နေကြတာပါ။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း နံနက်ခင်းသတင်းတိုများ မန်ယူနည်းပြသစ် တန်ဟတ်ရဲ့လက်အောက်မှာ အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်လာမဲ့ ကစားသမားဟာ တောင်ပံကစားသမား ဆန်ချိုဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန်ချိုဟာ နေရာလွတ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး တန်ဟတ် လက်အောက်မှာ တိုးတက်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ကစားသမားဟောင်း ဝက်ဘရောင်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲမက်ဒရစ်နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်းက သူ့အနေနဲ့ ဘာသာစကားကြောင့် မန်ယူအသင်းကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဇီဒန်းက အင်္ဂလိပ်စကား
KT | 25/06/2022
နေမာလက်သစ်ကိုအိုးထရက်ဖို့ဒ်ထံမဖြစ်မနေအရခေါ်ယူသွားရမယ့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နေမာကို ဝယ်ဖို့တတ်နိုင်တဲ့ ကလပ်အနည်းငယ်သာရှိပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ငွေကြေးအရ စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ဖို့ လုံလောက်တဲ့ နုံအမှုနှင့် စိတ်ပျက်အားငယ်စရာအဖြစ် ရှုမြင် ခံရမှာ သေချာ ပါတယ် ။ အက်ဒ်ဝုဒ်ဝါ့ဒ်ရဲ့ သက်တမ်းအတွင်း ယူနိုက်တက်ဟာ နေမာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ခေါ်ယူဖို့ ပေါင်သန်း ၂၀၀
မာတာရဲ့နေရာကိုဆက်ခံသွားဖို့ အကောင်းဆုံးအစားထိုးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာမယ့် ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် အဲရစ်ဆင်
မာတာရဲ့နေရာကိုဆက်ခံသွားဖို့ အကောင်းဆုံးအစားထိုးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာမယ့် ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် အဲရစ်ဆင် Christian Eriksen ၊ Frenkie de Jong နှင့် အခြားသူများသည် ယခုနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလတွင် မန်ယူကွင်းလယ်ရေဒါတွင် ရှိနေကြသည်။ အဲရစ်ဆင်၏ မကြာသေးမီက သမိုင်းသည် ရှုပ်ထွေးနေပြီး အိုးထရက်ဖို့ဒ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် အမှန်တကယ် မနီးစပ်ခဲ့ဘဲ ကစားသမားနှင့် နှစ်အနည်းငယ်ကြာ ရောယှက်နေခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ စပါးအသင်း
တန်ဟဂ်ရဲ့ရာသီကြိုခရီးစဉ်မှာ အထင်ကြီးစရာအခွင့်ရေးတွေရှိနေတဲ့ ကာရစ်လက်သစ် ဂျိမ်းစ်ဂါနာ
တန်ဟဂ်ရဲ့ရာသီကြိုခရီးစဉ်မှာ အထင်ကြီးစရာအခွင့်ရေးတွေရှိနေတဲ့ ကာရစ်လက်သစ် ဂျိမ်းစ်ဂါနာ Garner သည် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက Nottingham Forest တွင် အငှားဖြင့် သွားရောက်ကစားခဲ့ ပြီး ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်များဖြင့် ချီးကျူးမှုများစွာကို ရရှိခဲ့သည်။ ဗဟိုကွင်းလယ်ကစားသမားသည် Nottingham Forest FA ဖလားအောင်မြင်မှုအချို့တွင် ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး East Midlands ကလပ်၏ထိပ်တန်းအဆင့်သို့မြှင့်တင်ရေးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ အသက်
တန်ဟဂ်ရဲ့တိုက်စစ်မှာအဓိကလက်နက်ဖြစ်လာနိုင်မယ့် သရဲနီလူငယ် ဂျေဒန်ဆန်ချို
တန်ဟဂ်ရဲ့တိုက်စစ်မှာအဓိကလက်နက်ဖြစ်လာနိုင်မယ့် သရဲနီလူငယ် ဂျေဒန်ဆန်ချို ယခုနွေရာသီတွင် အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ် အပြောင်းအလဲများစွာကို မျှော်လင့်ထားသော်လည်း၊ ဆယ်ဟက်ဂ်သည် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက စွမ်းဆောင်ရည်နည်းပါးသော လက်ရှိယူနိုက်တက်ကြယ်ပွင့်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို အလေးပေးဖော်ပြထားခဲ့ပြီး ဖျော်ဖြေမှု ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကစားဟန်နှင့် ပွဲတွေကိုအနိုင်ရရှိအောင် ချဉ်းကပ်သွားမယ့်လို့ ပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာ ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jadon Sancho ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက မန်ယူအသင်းမှာ မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် Erik
တန်ဟဂ်လက်ထက်မှာကျယ်​​​ပြန်တဲ့တိုက်စစ်ဆင်ကစားသမားအဖြစ်မြင်တွေ့ရမယ့် သရဲနီ ဆန်ချို
ယူနိုက်တက်မှာသူကစားချင်ဆုံးနေရာကိုပြောပြလိုက်တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီဒီဂျောင်
လိုင်ယွန်အသင်းထံမှယူနိုက်တက်အသင်းကြားဖြတ်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ အီဗရာလက်သစ် မာလာစီယာရဲ့ကစားပုံအကြောင်း
ရာသီကြိုထရိန်နင်မှာစောလျင်စွာပါဝင်လာခဲ့ပြီး စီနီယာအသင်းကြီးအတွက် သူ့ရဲ့ဆာလောင်မှုကိုပြသလိုက်တဲ့ အာဂျင်တိုင်းကြယ်ပွင့် ဂါနာချို
© 2022 Myanmar Man United..